Ukhunjulwe u-Oliver Mtukudzi kumnyadala weJazz #CTIJF2019 - Vernac News
April 1, 2019 March 14, 2020 Vernac News
EKapa – Umnyadala woMculo Womngqungqo WaseKapa (Cape Town International Jazz Festival) waminyaka ubugqiba iminyaka engamashumi amabini wasekwayo. Kwimpelaveki edlulileyo amawaka abathandi bomculo bebedibene eKapa bezokuzimasa oluncuthu lomculo.
Umsitho walonyaka uqale ngoLwesihlanu umhla ka 29 EyoKwindla ukuya kumhla ka 30 EyoKwindla.
Usuku lokuqala lwalomnyadala luvulwe yingqanga yomculo womngqungqo uSteve Kekana oye wonwabisa abathandi bomculo ngeengoma ezifana noo-Haufi Le Morena kunye nethandwa kakhulu u-Take Your Love and Leave Me.
Ngaphaya koko abo bebezimase lomnyadala kusuku lokuqala bonwatyiswe ziimvumi ezifana noo-Shekhinah, iqela iBCUC, iqela elaphumelela imbasa ye-Grammy iSoweto Gospel Choir belikhona nalo, eliqela livalelise ngokucula u-Pata-Pata, ingoma eyadunyiswa ngumculi uMiriam Makeba
Imvumi edumileyo yaseMelika uChaka Khan naye wonwabise abathandi bomculo ecula iingoma zakhe ezidumileyo.
Usuku lwesibini luquke amagqala afana nooJonathan Butler, Don Laka kunye neqela iGypsy Kings.
Ukhunjulwe umculi ongasekhoyo u-Oliver Mtukudzi. Lengqanga yomculo womngqungqo ilishiye eli kwinyanga yoMqungu, eswelekela ekhayeni lakhe eZimbabwe. Eliqela elinemvumi ngeemvumi beliquka noVusi Mahlasela. Ingoma u-Neria ibabethe bachiphiza iinyembezi abantu.
Iqela iTuku Music ebelikhumbula u-Oliver Mtukudzi ongasekhoyo
Abawuvali umlomo abathandi bomculo ngemvumi uFKJ. Lentandane yaseFrance ibabethe banxila abantu ngeengoma ezifana noo-Taydow, Amsterjam kunye no- Vibin’ Out With.
UMorris Goldberg weli obeyenye yeemvumi zokugqibela zosuku lwesibini ubethe ngoncuthu oluvakalayo lomculo watsho ngengoma ekhethekileyo awayibhala mhla esiva iindaba zokusweleka kukaKippie Moeketsi. UMoeketsi wayengumculi womngqungqo weli owaswelekela eLondon engumfuduki ebaleka ulawulo lwengcinezelo ngokwebala.
Tagged #CTIJF2019, Cape Town International Jazz Festival 2019, Chaka Khan, Oliver Mtukudzi